Mizara ny finoana, izao tontolo izao eran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Betsaka ny olona ankehitriny tsy mila mahita an'Andriamanitra mihitsy. Tsy tsapanao hoe nanao zavatra tsy mety ianao na nanota. Tsy fantatrao ny hevitra momba ny fanamelohana na Andriamanitra. Tsy atokisan'ny fitondram-panjakana na ny foto-kevitry ny fahamarinana izy ireo izay matetika no nampahory ny olon-kafa. Ahoana no fomba itondrana ny vaovao tsaran'i Jesôsy amin'ny teny ka misy dikany ho an'ireo olona ireo? Ity lahatsoratra ity dia manazava ny filazantsara amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fifandraisana interpersonal - izay mbola ananan'ny olona ny maha-zava-dehibe azy.
Ny olana lehibe indrindra ao amin'ny fiaraha-monina tandrefana dia fifandraisana tsy tapaka: ny fisakaizana izay mitondra fankahalana, fampanantenana izay tsy mitandrina ary manantena ho lasa diso fanantenana. Maro amintsika no niaina fisaraham-panambadiana tamin'ny mbola kely na tamin'ny maha olon-dehibe. Efa niaina ny fanaintainana sy ny korontana nateraky ny tontolo tsy fantatra. Nianaranay fa tsy azo atokisana ny tarehimarika ary ny olona dia amin'ny farany dia manao araka ny tombotsoany manokana. Maro amintsika no mahatsiaro ho very ao anatin'ny tontolo hafahafa. Tsy fantatsika hoe avy aiza isika, na aiza, na ho aiza, na ho aiza. Miezaka ny tsara indrindra izahay handehanana ireo zava-tsarotra eo amin'ny fiainana, hamakivaky ireo toeram-pitrandrahana ara-tsaina, ary aza manandrana tsy hampiseho ny fanaintainantsika izay tsapantsika, ary tsy fantatray raha mendrika izany.
Mahatsiaro ho irery tsy misy fetra isika satria toa mila mikarakara tena. Izahay dia tsy mila manolo-tena na inona na inona ary toa tsy manampy koa ny fivavahana. Ny olona manana fisainana ara-pinoana mifamadika dia mety ho izay manapoaka olona tsy manan-tsiny - satria ao anaty toerana tsy mety izy - amin'ny fotoana izay - ary milaza izy fa Andriamanitra no mampijaly azy satria tezitra aminy izy. Manambany ireo olona tsy mitovy amin'izy ireo. Ny fahatakaranao an'Andriamanitra dia tsy misy dikany, satria ny tsara na ny diso dia tsy mitovy hevitra, ny ota dia hevitra taloha ary ny fahatsapana fanamelohana dia sakafo ihany ho an'ny mpitsabo. Toa tsy misy dikany i Jesosy. Matetika ny olona no manapa-kevitra momba an'i Jesosy satria mino izy fa niaina fampakaram-bady izay nahasitrana olona fotsiny tamin'ny fanamafisana, nanao mofo tsy nisy na inona na inona, nandeha rano, dia nohodidinin'ny anjely mpiambina ary nahatonga fahavoazana ara-batana. afa-nandositra. Saingy tsy misy dikany izany eo amin'ny tontolo ankehitriny. Na dia teo aza ny nanomboana azy dia toa lavitra ny olana amin'ny fotoanantsika ankehitriny i Jesosy. Vaovao mahafaly ho azy manokana ny fitsanganany tamin'ny maty, fa maninona aho no tokony mino koa fa vaovao ho ahy ihany koa?
Ny fanaintainantsika izay tsapantsika amin'izao tontolo izao, izay tsy fantatra amintsika, dia ny fanaintainana izay fantatr'i Jesosy tamin'ny niainany mihitsy. Izy dia voafetsaky ny namany ary nanompa sy naratra tamin'ny manampahefana tao amin'ny firenena. Izy dia namadika ny oroka avy amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Fantatr'i Jesosy ny dikan'ny hoe rehefa miarahaba azy am-pifaliana ny olona indray andro ary mitsena azy amin'ny boos ary manompa ny ampitso. Jaona Mpanao Batisa, zanak'olo-mpiray tam-poan'i Jesosy, dia novonoin'ny mpitondra notendren'ny Romana, noho ny fahalemeny. Fantatr'i Jesosy fa hovonoina koa izy satria nanontany ny fampianarana sy ny toeran'ny mpitondra ara-pivavahana jiosy. Fantatr'i Jesosy fa halan'ny olona tsy misy antony ny olona, ​​ny namany dia hiala aminy ary hamadika azy, ary ny miaramila hamono azy. Nanao soa tamintsika izy, na dia efa fantany rahateo fa isika olombelona dia hahatonga azy hanaintaina ara-batana ary hamono azy mihitsy aza. Izy no olona tsy mivadika amintsika, na dia mankahala aza isika. Tena namana izy ary ny mifanohitra amin'ny mpisandoka iray. Izahay dia toy ny olona latsaka tao anaty renirano mafana. Tsy afaka milomano izahay ary i Jesosy no mitsambikina amin'ny rano mangatsiaka mba hamonjy antsika. Fantany fa miezaka ny zavatra rehetra azo atao isika, saingy tsy afaka mamonjy ny tenantsika ary tsy hiditra amin'ny alalàn'ny fidirana an-tsehatra. Tonga teto aminny tontolontsika tsy manam-pitiavana i Jesosy ary fantany tsara fa halany ary hovonoina izy. Nanolo-tena ho anay i Jesosy mba hanoro antsika fomba tsara kokoa. Izy no olona azontsika itokisana. Raha vonona hanome ny fiainany ho antsika izy, na dia hitiavona aza isika, tsy mainka ve isika matoky azy raha manaiky azy ho namana isika?
Afaka milaza zavatra momba ny fiainana i Jesosy. Momba ny hoe avy aiza, aiza, ary aiza ary isika ahoana. Azony lazaina amintsika ny loza ateraky ny antsointsika hoe fiainana eo amin'ny sehatry ny fifandraisana. Afaka matoky azy isika ary mahita fa mendrika izany. Rehefa manao izany isika dia azo antoka fa mahatsapa fa mitombo ny fatokisantsika. Amin'ny farany, dia mety foana izany.
Matetika izahay dia tsy mila namana izay marina foana satria manelingelina. Fa i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, dia tsy karazana olona milaza hoe "efa nolazaiko taminao faingana!". Nitsambikina tao anaty rano izy, nandiso ny fiezahantsika hikapoka antsika, nampiakatra antsika teny amoron-tsiraka ary namela aina. Manohy isika, manao zavatra ratsy ary manondraka Malachi iray hafa ao anaty rano. Amin'ny farany, hanontany azy isika hoe aiza ny loza mampidi-doza ataontsika mba tsy hampidi-doza ny tenantsika. Saingy azontsika antoka ihany koa, tsy zavatra ilaina ny famonjena antsika, fa zavatra akaiky ny fo.
Manam-paharetana amintsika i Jesosy. Mahatonga antsika hanao fahadisoana izy ary mamela antsika hiaritra ny vokatr'ireny hadisoana ireny. Avelany hianatra an'izany isika, fa tsy avelany hianjera mihitsy. Mety tsy hino toky akory isika raha tena misy, fa afaka mahazo antoka isika fa ny faharetany sy ny famelan-keloka dia lehibe kokoa sy tsara kokoa ho an'ny fifandraisantsika noho ny fahatezerana sy ny fampisarahana. Fantatr'i Jesosy ny fisalasalantsika sy ny tsy fahatokisantsika. Takany ny antony mahatonga antsika tsy dia hatoky antsika satria naratra koa izy.
Ny antony maha-be faharetana azy dia satria tiany isika hahita azy ary hanaiky ny fanasana manokana azy amin'ny fankalazana mahafaly mahafinaritra. Jesosy dia miresaka fifaliana lehibe, fifandraisana tena sy maharitra sy mandrakizay ary manatanteraka. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminy sy amin'ny hafa, dia fantatsika hoe iza marina isika. Natao ho an'ireo fifandraisana ireo izahay, izay no antony itiavantsika azy ireo be. Izany indrindra no natolotr'i Jesosy antsika.
Ny fiainana eo alohany dia mendrika ny fiainana. Izany no antony nandraisan'i Jesosy an-tsitrapo ny fanaintain'ity tontolo ity ary nanondro fiainana tsaratsara kokoa izay ho avy. Toy ny fandehanana an-tany efitra ka tsy nahalala izay alehantsika. Nandao ny fiarovana sy ny fampiononana paradisa i Jesosy ary niatrika ny tafio-drivotra izao ary nilaza tamintsika hoe: Misy fiainana ahafahantsika mizara izay rehetra tsara tarehy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tokony handeha hiaraka aminy fotsiny isika. Azontsika atao ny miteny hoe "Misaotra fa miezaka ny vintana eto an-tany aho" amin'ity fanasana ity, na azontsika manaiky ny toroheviny. Jesosy dia milaza amintsika ny hoe aiza koa isika izao. Mbola tsy any amin'ny paradisa isika izao. Maharary ny fiainana. Fantatsika izany ary fantany ihany koa. Efa niainany izany. Izany no antony tiany hanampiany antsika hiala amin'ity tontolo tsy misy fanantenana ity ary hahafahantsika miaina be dia be izay nomaniny ho antsika hatramin'ny voalohany.
Nilaza i Jesosy fa misy ny risika misy eo amin'ny fifandraisana eto amin'ity tontolo ity. Ny fatoram-pianakaviana sy ny fisakaizana no mety ho fifandraisana mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra eo amin'ny fiainantsika raha miasa izy ireo. Saingy tsy manao an'izany foana izy ireo ary avy eo mahatonga ny fanaintainana lehibe indrindra. Misy fomba mahatonga fanaintainana ary misy fomba izay manome hafaliana. Mampalahelo fa misy olona mitady fomba hitarika fifaliana miteraka fanaintainana amin'ny olona hafa. Indraindray, rehefa miezaka misoroka ny fanaintainana isika dia tsy manadino ny fifaliana koa. Izany no antony ilantsika toromarika azo antoka rehefa mandehandeha any an-efitra isika. Afaka mitarika antsika amin'ny lalana marina i Jesosy. Amin'ny manaraka azy dia ho tonga any amin'izay misy azy isika.
Ny Mpamorona Andriamanitra dia mila fifandraisana amintsika, fisakaizana izay maneho ny fitiavana sy ny fifaliana. Isika dia voatahiry sy matahotra, namadika ny Mpamorona, miafina ary tsy te hanokatra ireo taratasy nalefany ho antsika. Izany no antony nahatonga an'i Andriamanitra ho tonga olombelona i Jesoa. Tonga teto amin'izao tontolo izao isika mba hilaza amintsika fa tsy tokony hatahotra isika. Namela ny helokay Izy, nomeny zavatra tsara lavitra noho izay ananantsika isika ary maniry ny hiverenantsika hody any amin'ny toerana tsy milamina sy tsy tony. Novonoina ny mpitondra hafatra, fa ny hafatra dia mijanona ho toy izany ihany. Mbola manome finamanana sy famelan-keloka ho antsika i Jesosy. Tsy vitan'ny hoe miaina izy ary manolo-tena hampisehoana antsika ny lalana, fa mandeha miaraka amintsika kosa ary mamonjy antsika amin'ny rano mangatsiaka. Izy namakivaky matevina sy manify miaraka aminay. Izy dia maharitra amin'ny famonjeny antsika sy aharetana mandra-pahatongan'izany. Afaka miantehitra aminy isika, na dia tsy mankasitraka antsika aza ny olon-drehetra.
Miaraka amin'ny namana iray toa an'i Jesosy dia tsy mila matahotra ny fahavalontsika intsony isika. Tsara ny manana namana izay mihoatra ny olon-drehetra. Jesosy no sakaizany. Nilaza izy fa manana ny hery rehetra eo amin'izao rehetra izao. Nampanantena antsika Izy mba hampiasa ny fahefana ho antsika. Jesosy dia manasa antsika ho amin'ny fankalazana azy any amin'ny paradisa. Nivoaka tamin'ny lalany izy hitondra anay fanasana. Novonoina ho faty aza izy, saingy tsy nanakana azy tsy ho tia antsika. Na eo aza izany dia manasa ny rehetra hanatrika izany fankalazana izany izy. Ahoana ny aminao Angamba tsy tena mino ianao fa misy olona mahatoky na tsara ny fiainana mandrakizay. Tsy maninona izany - fantany fa ny zavatra niainanao dia nahatonga anao tsy hisalasala momba an'io fitakiana io. Mino mafy aho fa afaka matoky an'i Jesosy. Aza raisina ny teniko, andramo. Hiditra amin'ny sambony. Heveriko fa te hijanona ao anatiny ianao. Hanomboka manasa olona hafa hiditra ianao. Ny hany antony nanjavanao dia ny maha very anao.